Hababka Maareynta Walwalka Ardaynimada - Daryeel Magazine
Hababka Maareynta Walwalka Ardaynimada
Arday nimadu waa xaalad gooniya oo wadata cadaadis dheeriya iyo culaysyo kala duwan, waa xaalad uu qofka ardayga ah u baahan yahay is garab taag iyo caawimaad dheeriya. Ardaydu waxay kamid yihiin dadka u nugul walwalka iyo niyad jabka maadaama ay dagaal kula jiraan caqabado badan oo la rabo inay ka gudbaan xilligaas.
1. Ku xidhnow Rabbiga wayn ee na uumay: Shaki kuma jiro in Allah uu yahay kan xaliya dhibaato kasta oo adoomi hiisa soo wajahda, Ilaali salaadaha waajibka ah, kana fogoow xumaha, salaada waa furaha farxada iyo guusha qofka. Hadaad qodobkaas joogtayso walwal iyo stressku wey kugu yaraa nayaan.
Hurdadu waa qodab kale oo muhiim u ah caafimaadka qofka, khaasatan ardayga. Isku day inaad seexatid hurdo kugu filan habeenkii si aad maalinkii u noqotid qof firfircoon. Sidoo kale hurda la aantu waxay ka qayb qaadataa cuduro badan sida, sonkorowga, wadna xanuunka, niyad jabka iwm. hurdo la aantu waxay kaloo keentaa dib u dhac qofka ku yimaada iyo niyad jab aan xad lahayn.
Cun cunto caafimaad leh: Cuntadu waa shay lagama maar maan u ah jirka qofka, si aad u noqotid mid caafimaad qaba oo kasoo baxa shaqooyinka kuu yaal waa inaad cuntaa cunto isku dheeli tiran oo nadaafad ahaana hagaagsan. Badso khudrada iyo miraha.
Samee jimicsi joogto ah: Marka noloshu cidhiidhi kula noqoto, wax walbana kaa hor yimaadaan, waxaa laga yaabaa halka shay ee aad niyada u haysaa inuu noqdo inaad gurigaaga ka baxdo oo banaanka kusoo yara hawa gadisato. Maahan shay xun waa shay loo baahan yahay oo kaa yarayn kara xaalada aad ku jirtid.
Ka fogoo isticmaalka waxyaalaha siyaadiya tamarta: Isticmaalka kafeega, ama dawooyinka yareeya hurdadu waxay kaa caawin karaan inaad habeenkii oo dhan soo jeedo si aad wax u akhrisato balse waxaa taas ka daran inay qofka ka dhigaan mid daalan oo niyad jabsan awoodna aan u lahayn inuu maalinkii wax shaqaa qabto, taasoo keeni karta stress.
Isku day inaad yeelatid qof niyada kuu dhisa mar walbana kugu waaniya waxa horumarkaaga ah: Kali nimadu waa shay dhib ah oo qofka galin kara xaalado uusan kaligiiis maarayn karin, waxaa dhakhaatiirta cilmi nafsigu isku raaceen in kali nimadu ay keento stress, walwal iyo xataa waali mararka qaarkood. Hadaba isku day inaa yeelatid qof kuu dhaw oo mar walba garab kaaga jooga kuguna waaniya horumar kaaga xumaantana kaa reeba, waayo nolosha arday nimadu waa shay mar walba wadata stress iyo cadaadis siyaadaa.
Haka harin hirgalinta himilooyin kaaga: Qof walba wuxuu lee yahay waxyaalo uu jecel yahay iyo riyooyin uu rabo inuu ka dhabeeyo si uu nolosha guul uga garo. Waxaa laga yaabaa hadaad arday tahay in qorshe maal meed kaagu uu yahay mid mashquula oo casharao akhris, imtixaan diyaarin, kooxo aad si wadajir ah wax u akhrisaan iyo waxyaalo kale oo badan ay kuugu jiraan qorsha haaga. Balse ha ilaawin inaad 1-2 saac maalin walba uga qoon dayso inaad samaysid waxa aad jeceshahay oo himilaada ah, hadii aad taas samaysid waxaa siyaadaya farxa daada waxaana yaraanaya walwalka iyo cadaadiska ku saaran maadaama aad isu aragtid qof shaqo muhiima naftiisa u qabtay.
Ka ilaali caaadiska badan naftaada: ardayda qaar kood waxay jecel yihiin inay bartaan waxyaalo aad u badan oo aan maskax doodu awood ay ku qaabisho u hayn, tusaale ahaan anigayga qoraalkan qoraya waxaan la kulmay arday soomaaliyeed oo jaamacad ka diyaarinayay 3 maado oo kala duwan balse aakhirkii uu haleelay stress kaasoo aakhirkii ku dhawaaday inuu waasho asagu wuxuu u arkayay inaysan dhib u gaysan karin culayska uu isa saarayo, balse xaqiiqdu waxay tahay maskaxda aadanuhu waxay lee dahay cadad ay ku qaadi karto ama ku qaban karto shaqooyinka loo diro hadii intaas kabadan la saarana way isku dhex yaacaysaa. Hadaba ha saarin naftaada culays aysan qaadan karin.
Badso qaadashada hawada saafiga ah: Markasta oo aad dareentid stress ama walwal, qaada shada hawo aad si qoto dheer u soo jiiday waxay kala furfurtaa mawjadaha stresska ee kugu soo fool leh. Isku day jimicsi gaan; qaado neef aa si tartiib ah u soo jiiday adoo ka qaadanaya hawada sanka, hay hawada in dhowr ilbiriqsi ah, kadibna ka sii daa neefta jirkaagu soo celinayo afka, kusoo celceli arintaas ilaa iyo intaad ka nafisaysid.
Maareynta Walbahaarka Hababka Loo Kordhiyo Awoodda Maskaxda Wax Ka Baro Hababka Looga Hortago Guuldarada Hababka Ugu Fiican Ee La Iskugu Diyaariyo Imtixaanaadka Darajo Sarena Loo Keeno